सिद्धार्थ इक्वीटी ओरियन्टेड स्कीमको नाफा ८१ लाख ८४ हजार | गृहपृष्ठ
Home लगानी सिद्धार्थ इक्वीटी ओरियन्टेड स्कीमको नाफा ८१ लाख ८४ हजार
on: ६ मंसिर २०७५, बिहीबार १६:०१ लगानी
सिद्धार्थ इक्वीटी ओरियन्टेड स्कीमको नाफा ८१ लाख ८४ हजार
मङ्सिर ६, काठमाडौं (अस) । सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित सिद्धार्थ इक्वीटी ओरियन्टेड स्कीमले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/०७६ को कात्तिक मसान्तमा रू. ८१ लाख ८४ हजार कुल नाफा कमाएको छ । असोज मसान्तमा योजनाले रू. १ करोड ९४ लाख २६ हजार कुल नाफा कमाएको थियो । कात्तिक मसान्तमा योजनाको बैङ्क मौज्दातमा रू. ३३ करोड ५६ हजार रहेको छ ।
सो समयमा योजनाको प्राप्त भइसकेको आम्दानी रू. २ करोड ७४ लाख ७६ हजार र प्राप्त भइनसकेको नोक्सानी रू. १ करोड १४ लाख २८ हजार रहेको छ । कात्तिक मसान्तमा योजनाको प्रति एकाई खुद मूल्य रू. १० दशमलव ४२ रहेको छ । असोज मसान्तमा योजनाको प्रति एकाई खुद मूल्य रू. १० दशलव ५४ रहेको थियो ।
कात्तिक मसान्तमा योजनाले ५७ कम्पनीको १२ लाख ५० हजार ३ सय ५१ कित्ता सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा रू. ५६ करोड ४७ लाख ८५ हजार लगानी गरेको छ । यो योजनाको योजना व्यवस्थापकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड र कोष प्रवर्धक सिद्धार्थ बैङ्क लिमिटेड रहेको छ ।
सिद्धार्थ इक्वीटी ओरियन्टेड स्कीमको कुल आय २ करोड
१३ माघ २०७५, आईतवार १७:३२
सिद्धार्थ इक्वीटी ओरियन्टेडको धितोपत्रमा लगानी ७२ करोड १७ लाख
१४ कार्तिक २०७५, बुधबार १४:४४
सिद्धार्थ इक्वीटी ओरियन्टेडको प्रतिफल वितरण
२१ भाद्र २०७५, बिहीबार १४:१२
सिद्धार्थ इक्वीटी ओरियन्टेड स्कीमको लगानी ७९ करोडभन्दा बढी
१२ भाद्र २०७५, मंगलवार १४:०३